Mhoroi, munhu wese, kune imwe yakanaka nhau kwatiri uye isu, isu takagadzira mbiri nyowani yekugadzirisa posture corrector. Mifananidzo yechitambi chako se,
PAIN RUTENDO & RUTSIMBISO SEZVAKANYORA & ZVINODHANYA MUFANANIDZO - Unogara pamberi pekombiyuta kwemaawa kana kuti hauna kugadzikana uye kushungurudzika kumashure nemafudzi? Usanetseka; Zvinoreva kuti kumashure kwebrace kuri kushanda uye kunongedza musana wako nenzira yazvinofanira kunge uri! Iyo yekumira inogadzirisa inopa inonyanya kudikanwa-rutsigiro rutsigiro rwemuviri wako urikutsvaga kubatsira kuvandudza hutano hwako hwese hwepamuviri uye hwekumira.
UPENYU uye YEMBONESA MUFANANIDZO: Kubva pane Ergonomics dhizaini, Iyo yekumhara brace inogonesa iwe kuvandudza musana wakasimba nekusimbisa mapfudzi ako, mutsipa uye kumashure, kugadzira chimiro chakanaka, kuvandudza marwadzo mumutsipa, pfudzi, kumusoro kumashure uye shandura maitiro akaipa e kutsvedza. Kunyangwe iwe uchida kupora kubva mukukuvara kana uchida kuvandudza chimiro, iyo SR iri pano kuti ikubatsire. Shandisa mutserendende tepeti tambo kurongedza yako vertebrae, simbisa tsandanyama dzako, uyezvezve mukufamba!
ANOGONESESA MUFANANIDZO WEMAHARA ZVINONZI: SR inoridzora yekugadzirisa, shandisa isina kuremerwa, yakapfava, ine porous mhepo yekuisa izvo zvinoita kuti ganda rako riite zvakanaka. Iyo yekumhara brace yakagadzirwa neyakaonda yakafemedzeka zvinhu iyo isingaone pasi pehembe. Iyo clavicle brace haikonzere kutsamwa kweganda kana kutsvaira, inogona kupfekedzwa kumba, kubasa, kana kurovedza muviri.
YEKUSHANDISA PASI MUFANANIDZO: Universal size. Iyo yekugadzirisa kumashure yechipiri ine yakagadziriswa tambo nekuda kwayo iyo inokodzera vechidiki uye vakuru, varume nevakadzi. Iko kunokodzera 33 "- 47" chest chest. Iye zvino kuti chimiro chako chakavandudzika uye mhasuru dzako dzeshure dzinonzwa kusimba, une imwe nhanho yekutanga kuenda. Shandisa kupora kufamba uye upedze maitiro ako ekurapa!
Nei Posture Corrector Yakakosha Kune Vese Varume Nevakadzi?
Mabasa se clavicle brace yekupa clavicle posture rutsigiro apo ichishanda kunze, ichisimudza, yakagara padhesiki rekomputa, ichishanda muhofisi, nezvimwewo.
Inovandudza ndangariro uye kudzidza & Inoita kuti iwe utaridze kureba, inotsvedza uye inoratidzika.
Inoita kuti iwe utaridze uine chivimbo uye uine simba & inovandudza muviri kurongedza Inopedza kumashure uye kurwadziwa kwemutsipa & Inovandudza kufema.
Inogona kupfekedzwa zviri nyore pasi pejasi kana iri kubasa uye isingaoneki zvachose pasi pehembe dzako.
Isu takasimudzira yedu thoracic kurwadziwa corrector iyo inodzivirira kutsvedza & kutsamwisa uye inopa mafudzi kuenderana.
Yedu clavicle fracture brace inogadzirwa kubva kuhuremu, inofema yemhando yepamusoro neoprene.
Nzira yekuenderera mberi nekupfeka yako yekudzoreredza defector, kuti uwane iyo yakasarudzika posture?
Zvishoma, tanga nekuipfeka kwemaminetsi makumi maviri, tanga kuwedzera zvishoma nezvishoma huwandu hwenguva inoshandiswa nekuhupfeka nemaminitsi mashanu, uye wedzera kusvika paawa imwe pazuva.
Naizvozvi, zvaizoita kuti chimiro chako chive chakakwana uye chaizongopfekedzwa pano neapo.